“Inona ary izao no mahagasy anao?” | mandimby maharo
“Inona ary izao no mahagasy anao?”	Posted on 28 September 201221 February 2014 by Mandimby Maharo	“Inona ary izao no mahagasy anao?”
Ny Tena, ny Teny ary ny Tany (hono) hoy ireo mpandinika no mamaritra ny maha olona ny olona iray. Ny tena izay mirafitra ho vatana, saina, ary fanahy. Voazara ho karazany roa tokoa manko ny olona dia ao ny vavy, dia ao ny lahy. Ireo dia samy nomena saina handinika sy hisafidy ka tompon’andraikitra amin’izay ataony. Izany no mahatonga ny olona sasany hifidy ny ho tsara fanahy na ho ratsy fanahy. Eo koa ny teny. Ny teny dia ilay famoahana izay ao an-tsaina sy ao am-po. Fa eo koa ilay hoe mahafehy ny teny. Ilaina io mba entina mamoaka araka izay tokony ho izy ny hevitra tiana ho lazaina ka ho azon’izay mihaino izany. Ary ilay farany dia ny tany. Ny olona tsirairay avy dia samy manana ny tany niaviany. Nofaritan’ny fiarahamonina ho firenena moa izany ka nampivondronany ireo izay iray fiaviana ho iray firenena.
Azo itarina ka ampiharina amin’ny firenena koa nefa io famaritana io. Ny firenena iray dia manana ny tenany. Ny olona tsirairay monina ao no mandrafitra izany: misy ary firenena be mponina, ary misy firenena vitsy mponina. Tsy ny isany fotsiny nefa fa eo koa ny toetsain’ireo mponina ao; ny fombany, ny kolotsainy, ny tantarany sy ny hoaviny. Manan-tsaina iraisana nefa ireo mponina ireo ka izay no mandrafitra ny safidiny amin’izay handrindrany ny fiarahany monina. Io fahafahany mifidy ny fiarahany monina io no mampisy ny firenena tia mandray vahiny, ohatra, sy ireo izay tsy tia.
Ny firenena tsirairay avy koa dia manana ny fiteniny. Ka na misy aza ny mety fitovian’ny foto-pitenenana eo amin’ny firenena roa samy hafa dia tsy maintsy misy ihany ny fahasamihafa azy. Hita ohatra izany eo amin’ny teny anglisy sy amerikana. Na dia anglisy ihany aza no nandeha nifindra monina tany amerika avaratra dia niova ny fiteniny rehefa lasa fireneny azy manokana izy.
Ary ny amin’ny tany dia araka izay efa nolazaina dia nofaritana ho samy manana ny taniny ny rehetra. Nasiana ny sisitany. Nofaritana ny saritany ary samy mipetraka amin’ny anjarany avy.
Ho antsika Malagasy ary, mahatsiaro ve isika fa feno ireo singa telo ireo ka afaka hilaza fa Malagasy? Tena tompon’ny tena tokoa ve isika ka manaja izany? Toa lasa tsy mampaninona ny malagasy ny manimba ny tena sy ny olona ka zary fomba fanao ny mamono olona? Miankina amin’ny fanajantsika ny vatatsika sy ny manodidina antsyka izany. Miantehitra amin’ny fananatsika toetsaina malagasy ihany koa. Ary indrindra ny fiainantsika ny toe-panahy malagasy. Fiteny ny hoe “gasy ka manja”, io ilay vatana. Fanesoana koa ilay hoe “vita gasy”, vokatry ny toetsainy tsy tia manao zavatra matotra. Ary ohabolana malagasy ilay hoe “ny fanahy no maha olona”. Mahafehy ny teny malagasy ve isika? Sa misalovana ny tenin’ny hafa ka mibadabada rehefa te haneho ny ao an-tsaina sy hamboraka ny ao am-po? Mbola fiteny koa anie ilay hoe “andrianiko ny teniko, ny hafa koa feheziko”. Tsy vitsy amintsika no mahafehy teny vahiny 2 na 3 saingy menatra sy toa miafina rehefa miteny malagasy. Ary maro ireo maneso ireo izay miezaka ny hampiasa ny teniny fa toa bado tsy maharaka fivoarana. Ary farany, tena antsika ve i Madagasikara? Io ilay atsointsika fa TANIndrazana. Izany hoe ilay niaviana satria nolovana avy amin’ireo lasa. Ny tany koa dia tsy ilay vovoka itsahina ihany fa eo koa ny biby sy ny hazo izay eo amboniny. Mampisy lanja ny tany koa ny atiny, ny ranomasina manodidina azy izay maha sarobidy azy. Koa raha miala amin’ny taniny ny olona iray dia banga ny maha izy azy. Ary raha ialan’ny olona ny tany iray dia tsy misy lanjany izany firenena izany.
Tags: MADAGASCAR, MalagaCategories: societé
One thought on ““Inona ary izao no mahagasy anao?””	Pingback: Aza mifanabatibaty fa tssss …! « mandimby maharo Leave a Reply Cancel reply	Enter your comment here...